PSG oo ku raad joogta wadadii ay kusoo qaadan laheyd bar-tilmaameedka buuxa ee kooxda Barcelona – Gool FM
PSG oo ku raad joogta wadadii ay kusoo qaadan laheyd bar-tilmaameedka buuxa ee kooxda Barcelona
(Paris) 20 Mar 2020. Wargeyska “Tuttosport” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in saraakiisha kooxda Paris Saint-Germain ay ku raad joogaan wadadii ay kula saxiixan lahaayeen xiddiga reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang inta lagu gudajiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa lala xiriirinayaa inuu ka tagayo kooxda reer London ee Arsenal xagaaga soo socda, iyadoo kooxo badan ee waa weyn oo Yurub ah ay xiiseynayeen adeegiisa.
Qandaraaska Aubameyang ee kooxda Gunners ayaa wuxuu dhacayaa xagaaga 2021, laakiin wali ma uusan ogolaanin inuu qandaraaska u kordhiyo, inkastoo ay dadaal wadaan maamulka Gunners si uu u sii joogo garoonka Emirates.
Laakiin wararka ayaa waxay tilmaamayaan in Pierre-Emerick Aubameyang uu xiiseynayo inuu u ciyaaro mid ka mid ah kooxaha horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga iyo sidoo kale naadiga Barcelona.
Balse marka ay Paris Saint-Germain soo gashay loolanka waxaa gabi ahaanba isbadashay aragtida xiddiga reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang, sida warbixinta lagu xusay.
PSG ayaa la filayaa inay ka tagi doonaan xiddigo dhowr ah oo ay ku jiraan Edinson Cavani iyo Mauro Icardi oo la filayo inuu dib ugu laaban doono kooxdiisa Inter, sidaas darteed saraakiisha Paris ayey qasab ku noqon doontaa inay soo afjaraan heshiiska Aubameyang.
Xubin ka mid ah xiddig ka tirsan kooxda Real Madrid oo u geeriyooday caabuqa Coronavirus